सर्वोच्चले संसद पुनर्स्थापना गरेको खण्डमा एमालेले स्वीकार्छ- नेता बोगटी — Sanchar Kendra
सर्वोच्चले संसद पुनर्स्थापना गरेको खण्डमा एमालेले स्वीकार्छ- नेता बोगटी
काठमाडाैं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि नेपालको राजनीतिमा नयाँ तरंग पैदा भएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिस र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्रपति बिद्या भण्डारीको निर्णय गैरसंवैधानिक भएको दाबी गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, एमाले नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहित १४६ जना सांसदले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका छन् ।
यो बिपक्षी गठबन्धनको सहित प्रतिनिधिसभा विघटनसँग सम्बन्धित २८ वटा निवेदन सर्वोच्चमा दर्ता भएका छन् । तर एमालेकै माधव नेपाल र झलनाथ खनालसमूह बाहेक ओली समूहका अध्यक्ष रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भने विपक्षीको कीर्ते दाबीका कारण संसद विघटन गर्नुपरेकाे दावी गर्दै आएका छन् । यिनै बिषयमा केन्द्रित रहेर एमाले केन्द्रीय सदस्य बिरेन्द्र बोगटीसँग संचारकेन्द्रले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
धन्यवाद छ संचार केन्द्रलाई।
देशभर कोरोन संकट छ, तपाईको स्वास्थ्य अवस्था ठिकै छ नी ?
स्वास्थ्य अवस्था ठिकै छ, तर देशको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर भएकाले चिन्तित पनि छु। यस कोरोना महामारीबाट सबै सुरक्षित रहुन ! म कामना गर्दछु।
नेपालमा पुनः संसद बिघटन भो ! यसले तपाईलाई जनतामा जान कत्तिको अफ्ठ्यारो परेको छ ?
दुःखका साथ भन्नुपर्छ, जनतामा जानका लागि अप्ठ्यारो त पर्दैन तर संसद विघटन हाम्रो कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा थियो। हामीले जनताकहाँ जून वाचाका साथ प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थियौं त्यो समय अगाबै यो परिस्थिति निर्माण हुनुमा राजनीतिक दल दोषी नै छन् । किनभने संवैधानिक हिसाबले पनि कम्तिमा ५ वर्ष एउटै सरकारले सहज ढंगले आफ्नो काम गर्न पाओस् ताकि त्यो सरकारले घोषणा गरेका नीति तथा कार्यक्रम र चुनावी एजेण्डाहरु जनतामाझ प्रभावकारी ढंगले लागू होस् भन्ने चाहना हाम्रो हो। तर यस्तो विषम परिस्थितिमा यो खालको राजनीतिक अभ्यासले हामी सबैलाई नैराश्यता पैदा गराएको छ। तर हामीले नचाहँदा नचाहँदै पनि नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र माधव नेपाल पक्ष, उपेन्द्र यादव पक्षको अपवित्र गठबन्धनले यो स्थिती सिर्जना गरेको हो भन्ने कुरा जनताले बुझिसकेका छन्। हामी जनताकहाँ सरल ढंगले जाने र यो सरकारले गरेका प्रतिफलयोग्य कामको बारेमा बेली-बिस्तार गर्ने अनि यो परिस्थिति आउनुमा विपक्षी दलहरुकै अकर्मण्यता हो भनेर बुझाउने कोसिस गर्छाैं । फेरी पनि जनताकै माझ जाने त हो।
हैन अहिलेसम्म राजनीतिक दलहरुले कहिले बिकासका नाममा, कहिले परिवर्तका नाममा नेपाली जनतालाई झुक्याउदै चुनाव जित्दै गरेको देखिन्छ । अहिले तपाईको पार्टी नेतृत्वकाे सरकारले २/२ पटक संसद बिघटन गरिसकेपछिकाे अवस्थामा नेपालमा अब संसदीय ब्यबस्था नै असफल भएको प्रमाणित भएन र भन्या ?
हामीले अहिले नै संसदीय व्यवस्था नै असफल भैसक्यो भन्ने कोणबाट जानु हुँदैन। केही हदसम्म शंका-उपशंका लिने काम नभएका होइनन्। इतिहासमा धेरै चोटी संसद विघटन पनि भएका छन्, पुनर्स्थापित पनि भएका छन् तर ती घटनाका प्रकृति फरक-फरक छन्। अहिलेको संसद विघटन संवैधानिक हिसाबले चरण पूरा गरिसकेको हुनाले अर्को सरकारको विकल्प नहुँदा संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै स्थिर सरकार दिनका लागि ताजा जनादेश नै उपयुक्त विकल्प हो। त्यसकारण संसद विघटन हुँदा केही हदसम्म राजनीतिक अस्थिरता पैदा हुन्छ तर व्यवस्थालाई नै कुनै असर गरिसकेको हुँदैन । किनभने हाम्रो देशमा पहिलो संघीय प्रणाली भएको हुनाले कतै यस्तै घटनाक्रमले व्यवस्था नै ध्वस्त हुन्छ कि भन्ने एक कोणबाट चिन्ता र चासो हुनु स्वभाविक हो । तर यसलाई अर्को कोणबाट यो प्रणाली अझ मजबुत र व्यवस्थितरुपमा बनाउँदै लैजानुपर्छ भन्ने तर्क पनि बलियो रुपमा प्रस्तुत गर्नुपर्दछ।
अझ एमालेले त देशलाई पुनः बर्बादीतिर धकेल्दै छ भन्ने प्रतिपक्षको आरोप छ, यसमा तपाईको धारणा के हो ?
वास्तवमा भन्नुपर्दा यो भनाइप्रति कुनै सत्यता छैन । देशलाई बर्बादीतिर एमालेले होइन विपक्षी गठबन्धले नै लैजाने किसिमका गतिविधि गर्ने काम भइराखेका छन्। बरु नेकपा एमाले देशमा अस्थिरता नहोस्, राष्ट्रिय एकता कायम रहोस् भन्नका लागि अहिले पनि जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत भइराखेको अवस्था छ। नेकपा एमालेमाथि एक प्रकारको लाञ्छना लगाउने मात्रै उद्देश्य राखेर प्रतिपक्षले यो कुरा गर्न सुहाउँदैन।
राष्ट्रिय अखण्डता सार्वभौमिकता, देशको स्वाभिमान, जातीय सन्तुलन, समावेशिता र लोकतन्त्रको सुन्दर पक्षलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्ने विषयमा नेकपा एमाले सदैव अग्रगामी रूपमा प्रस्तुत हुन्छ। नेपालको संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई अझ सुदृढ गर्ने सवालका हिसाबमा नेकपा एमाले अझै सशक्त अनि आवश्यक औचित्यका आधारमा भूमिका खेल्छ। बरु विपक्षी पार्टी अहिले जुन गतिविधिमा अहोरात्र लागिरहेको छ त्यसले के संकेत गर्दछ भने नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई धरासायी बनाउने , लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने र देशीविदेशीको चलखेल बढाउने ,समाजमा जातीय सन्तुलन बिगार्ने, संविधानको गलत व्याख्या गर्ने जस्ता हर्कत गरेर सामाजिक आर्थिक राजनैतिक हिसाबले च्यूत हुने मनशायबाट अभिप्रेरित प्रतिपक्ष दल यो ठाउँमा पुगेको छ।
आवश्यकताभन्दा बढी महत्वकांक्षा राखेर देशलाई प्रतिगमनतर्फ धकेल्ने मनशायबाट उहाँहरु अभिप्रेरित भइराख्नु भाको छ त्यसलाई रोक्नका लागि नेकपा एमाले अहिलेपनि नेपाली जनताको साथमा छ। देशका जिम्मेवार पार्टीहरुलाई हामी अहिले पनि आग्रह गर्न चाहन्छौं कि,देशको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर राष्ट्रिय सहमतिका साथ एकताबद्ध भई देश विकासको युगमा सामेल हुनुहोस्। दलप्रति वितृष्णा पैदा हुने गरी जनतामा सन्देश नजाओस् भन्ने हाम्रो आग्रह हो।
संसद बिघटनबिरुद्ध मुद्दाहरु परेका छन्, बिहिबार र शुक्रबार सुनुवाई हुनेवाला छ, सर्वोच्चको फैसला के आउछ त्यो त भन्न सकिदैन तर भोलि संसद पुनर्स्थापना भएको खण्डमा एमालेले के गर्छ ?
सत्तापक्षलाई सहज वातावरणमा सरकार चलाउन दिने कुनै आधार देखिएन। यसकारण ताजा जनादेशका लागि जनतामा जाने निर्णय एकदमै स्वागतयोग्य छ। किनभने लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेकै चुनाव हो। राजनीतिक पार्टीहरूले चुनावमा जाने विषयमा शंका गर्नु या नजाने निर्णय गर्नु यो लोकतन्त्रप्रतिको आघात हो। सरकारले चुनावको मिति कार्तिक २६ र मंसिर ३ गतेका लागि घोषणा गरिसकेपछि लोकतन्त्रका हिमायती हूँ भन्ने दलहरुले स्वागत गर्नुपर्छ।
तर त्यसो हुन सकेन नेपाली समाजमा भ्रम छरेर राजनीतिक दललाई अनिर्णयको बन्दी बनाएर अगाडि बढ्ने जुन कोशिस गरियो त्यो कदापि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्तलाई कमजोर पार्ने रणनीति हो भन्ने हामीले बुझेका छौं। यदि कथमकदाचित फेरि पनि संसद पुनर्स्थापना हुने गरी सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको खण्डमा नेकपा एमालेले निर्णय मानेर जान्छ, तर प्राविधिक निर्णय भएता पनि राजनीतिक मुद्दाको समाधान भएको देखिँदैन। त्यसपछि राजनीतिक अस्थिरता पैदा हुने खतरा बढेर जान्छ। त्यसो नहोस् भन्नका लागि राजनीतिक दलहरू घोषित मितिको चुनावमै केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने नेकपा एमालेको अनुरोध हो।
यदि १४६ जना सांसदले हालेको रिट माग अनुसार देउवा प्रधानमन्त्री भए भने तपाईका पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले नैतिकरुपमा प्रधानमन्त्री पदबाट राजिनामा दिन्छन कि, संकटकाल लगाछन् ? ओलीले संकटकाल लगाउन सक्छन भन्ने हल्ला पनि सुनिन्छ…!
सर्वोच्च अदालतमा १४६ जना सांसदले हालेको रिट खाली face shaving लागि मात्र हो भन्ने बुझ्दा हुन्छ। दलीय प्रणालीमा निर्दलीय व्यवस्थाको कल्पना हाम्रो संविधानले गरेको छैन। दलीय प्रणालीमा दलको ह्वीप पार्टीको निर्णय अनुसार नै माननीय सांसदहरु चल्नुपर्छ। व्यक्तिको स्वइच्छाले अर्को दलको नेतालाई भोट हाल्ने वा हस्ताक्षर गर्ने छुट हुँदैन । त्यसकारण जसरी शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि जुन हस्ताक्षर संख्या छ त्यो नै अवैधानिक छ। यसकारण उहाँ प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना छैन। हामीले के पनि बुझ्नु पर्छ भने बहुमत प्राप्त सरकार केपी शर्मा ओलीको नै हो। त्यसो त दलीय निर्णयसहितको १५३ सदस्यकाे दाबी सहित राष्ट्रपतिज्यू समक्ष दावी पेश भएकै हो।
यसरी मान्ने हो भने उहाँले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिने होइन बरू अझ विश्वासका साथ भन्न चाहन्छु कि घोषित मितिको चुनाव उहाँकै नेतृत्वमा हुनुपर्दछ। परिस्थिति कहिलेकाहीँ नसोचेको भन्दा पर जानसक्छ, त्यस्तो अवस्थामा मात्र संकटकाल लगाउने बाध्यता सरकारलाई हुनसक्छ तर अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन । जहाँसम्म मलाई लाग्छ यो हुँदैन, किनभने कोरोनाको महामारीले देश अत्यन्त गम्भीर परिस्थितिमा छ हामीले त्यसलाई परास्त गरी सहज वातावरण बताउनेतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ । कोरोना माहामारीलाई जतिसक्दो चाँडो नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकारले सम्पूर्ण प्रयास र जनशक्ति लगाउनुपर्छ। छिटोभन्दा छिटो भ्याक्सिनको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। राज्यको सम्पूर्ण ध्यान यसैमा केन्द्रित गरेर महामारीलाई नियन्त्रण गर्न सकेको खण्डमा मात्र चुनावको वातावरण सिर्जना हुन्छ। यतिबेला सम्पूर्ण राजनैतिक दलहरु एकताबद्ध भएर कोरोना महामारीविरुद्धमा एकजुट भएर लाग्ने बेला हो। यसरी राजनीतिक खिचातानीमा जानु दुर्भाग्य हो।
यदि तपाईको पार्टीले चाहेजस्तै देशमा चुनाव भयो भने एमाले ठुलो पार्टी बन्ने सम्भावना कतिको छ ?
नेकपा एमाले ठुलो पार्टी बन्नका लागि आफै चुनाव गराएर हुने पार्टी होइन। विगतको चुनावले नै बताइसकेको छ की चुनाव जसले गराए तापनि नेकपा एमाले देशको पहिलो शक्ति थियो। नेपाली जनताको प्रिय पार्टी नेकपा एमाले जनताको माझमा लोकप्रिय भएकै कारण जनताले विश्वासका साथ ठूलो पार्टी बनाएका हुन्। आउने चुनावमा पनि नेकपा एमाले सरकारमा रहँदा गरेका विकासका असाधारण कामहरुको नतिजा र राष्ट्रिय एजेण्डासहितको विषयका आधारमा जनताले ठूलो पार्टी बनाउँछन् भन्ने हामीले पूर्ण विश्वास छ। इतिहासमै पहिलोपटक विकासका हिसाबले अन्य सरकारकाका तुलनामा यो सरकार धेरै सफल भएको देखिन्छ।
तर अहिलेको अबस्था हेर्दा त एमालेप्रति जनता रुष्ट देखिन्छन नी ?
जनता जनार्दन हुन्, जनताको अभिमतलाई हामी कदर गर्छौं। तर तपाईले भनेजस्तो गरी नेकपा एमालेप्रति जनताको रुष्ट होइनकी बरु अझ एमाले लोकप्रिय भएको छ। अहिलेको नेकपा एमालेको सरकारले जनताले देख्नेगरी धेरै काम गरेको छ। ती कामका आधारमा जनताले मूल्यांकन गर्ने हुन् । म दाबीका साथ भन्छु फेरि पनि नेपाली जनताले नेकपा एमालेलाई दुईतिहाईसहितको बहुमतका साथ सरकारमा पठाउँछन्। यो सरकारको विकासका कामहरु देख्न नचाहनेहरुका लागि मात्र अहिले यो अवस्था सिर्जना भएको छ।
नेकपा एमाले राष्ट्रियताप्रतिको अडान, जनताको जनजीविकाको सवालमा, बिदेशी शक्तिसँगको सम्बन्ध र आन्तरिक व्यवस्थापनमा उच्चतम हासिल गरेकोले फेरि पनि नेकपा एमाले जनताको अपार मतका साथ देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्छ । त्यसैले नेपाली जनताको राष्ट्रिय आकांक्षा “सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल”को मूल महत्वकांक्षालाई पूरा गर्नु छ। जनताको बहुदलीय जनवादको जगमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई अझ मजबुत र शुद्धिकरण गर्दै अगाडि बढ्ने विश्वास नेपाली जनतालाई छ। जुनसुकै अवस्थामा नेपाली जनताले नेकपा एमालेलाई गर्ने माया काम र अडानका आधारमा र जनतामा भिजेका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नेछन भन्ने हाम्रो बुझाई हो। घोषित चुनाव निष्पक्ष ढंगले सम्पन्न हुन्छ। अहिले पनि प्रतिपक्षलाई के लाग्छ भने कतै चुनाव निष्पक्ष ढंगले हुँदैन कि भन्ने शंका छ। यो सरकारले विश्वासका साथ भनेको छ चुनाव भयरहित वातावरणमा निष्पक्ष ढंगले हुनेछ। लोकतन्त्रप्रति विश्वास राख्ने दलहरुले चुनावमा विश्वास गर्नुपर्छ।
एमालेले भन्ने गरेको जनताको बहुदलिय जनवादमा यस्तो प्रकारको एक दलिय अभ्यासको कतै पनि परिकल्पना गरिएको छैन, तर प्रधानमन्त्री समेत रहेका तपाईका पार्टी अध्यक्षले यस्तै खालको निर्णय किन गरिरहेका छन् ?
लोकतन्त्रमा हामीले दलीय प्रणालीलाई अझ मजबुत र सुदृढ गर्दै लैजानुपर्छ भन्ने अझैपनि नेकपा एमालेको मत छ। तपाईले भनेजस्तै गरी यो अबस्था प्रधानमन्त्री ज्यूले गरेको होइन । सत्य र तथ्यको आधारमा भन्नुपर्छ यो त विपक्षी गठबन्धनले नै निर्दलीय व्यवस्थामा धकेल्ने गरी उहाँको गठबन्धन भएको छ। हामी दलमा विश्वास गर्छौं, दलीय प्रणालीलाई विश्वास गर्छौं, दलको ह्वीप लाई मान्छौं । त्यसका आधारमा प्रक्रिया अगाडि बढेका छन् तर विपक्षी दलहरु यी सबै प्रक्रियाबाट च्यूत भएर निर्दलीय शैलीमा व्यक्तिका हस्ताक्षर प्रयोग गर्दै अगाडि बढ्नु यो लोकतन्त्रको लज्जास्पद कुरा हो।
कोही कसैलाई भ्रम नहोस् कि नेकपा एमाले जनताको बहुदलीय जनवादका आधारमा लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै दलीय प्रणालीलाई अझ बलियो आधारमा प्रस्तुत गर्ने एकमात्र पार्टी हो। यो पार्टीको अध्यक्ष र देशको प्रधानमन्त्रीबाट यस्ता गल्ति कदापी हुन सक्दैनन्। यी त विपक्षीका झुट्टा कल्पित भ्रम मात्र हुन। सचेत नागरिक, राजनीतिकर्मीहरु नेकपा एमालेप्रति गहिरो सद्भावका साथ साथमै रहन्छन्। त्यसैले हामीले परिकल्पना गरेकोभन्दा फरक तरिकाले देखिनेगरी गतिविधि विपक्षी गठबन्धनले गरेको हुनाले त्यसबाट हामी र नेपाली जनता सजक छौं ,सजक रहने छौं। हामी जबजका विशेषता माथि विश्वासका साथ अगाडि बढ्छौ।
नेकपा एमाले पार्टीले देशको संबिधान र कानुनको धज्जी उडाएको बिपक्षीहरुको आरोप छ नी ?
नेकपा एमालेले संविधान र कानुनको सम्मान गर्छ। हामी संविधानको परिधिभित्र रहेर देशलाई अगाडि बढाउन चाहन्छाैं। संविधानमा भएका व्यवस्थालाई हामी शिरोधार्य गर्छौं। नेकपा एमाले एक यस्तो पार्टी हो जो लोकतन्त्रप्रति वफादार सिपाही झैं हो। तपाईले भनेजस्तै गरी विपक्षीको आरोप यो हतास मानसिकताको उपज हो। बरु विपक्षीदलहरूले आफू लोकतन्त्र, संविधान र कानुनको मूल्य मान्यताभन्दा विपरीत गतिमा हिंँडेर दुनियाँलाई हसाउनु भएको छ। संविधान र कानुनको धज्जी उडाउनु दुनियाँमा कहीँ यस्तो देख्नु भएको छ ? न सरकार आफू बनाउनसक्ने न बनेको सरकारलाई काम गर्न दिने ! यस्तो पनि हुन्छ ? ‘हलो अड्काउने गोरु चुट्ने’ शैलीमा लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्छु भन्नेहरूको भाषामै बिरोधाभाष छ।
त्यसैले संविधान र कानुनलाई मजबुत पार्नका लागि सरकारले फेरि ताजा जनादेशका लागि चुनावको घोषणा गरेको छ। जब चुनाव हुन्छ, त्यसपछि संविधान र कानुनको अझ संरक्षण हुने अवसर प्रदान गर्दछ। यसका लागि नेकपा एमाले विपक्षी दलहरुलाई आह्वान गर्न चाहन्छ कि अहिलेको खिचातानी गर्नुभन्दा बरु घोषित चुनावलाई सफल पारौ। चुनावबाट सबैभन्दा ठूलो दल भएर आउनुहोस् सरकार चलाउनुहोस्, जनताको काम गर्नुहोस् । यसमा कसैले रोकेको छैन तर भ्रमको नाउँमा गरिने खेती नेकपा एमालेका लागि सह्य हुँदैन र नेकपा एमाले जनताको मतको कदर गर्दै जनताको माझमा जान्छ।
अन्त्यमा के देशमा अब संघियता नै असफल भएको संकेत देखा परेको हो ? हैन भने प्रधानमन्त्रीले संसद नै कोल्याप्स गर्ने बाटो किन रोजिरहेका छन् ?
विपक्षी गठबन्धनका कारणले गर्दा संघीयता नै असफल पार्ने हुन् कि ? हाम्रो चिन्ताको विषय यो हो। हाम्रोजस्तो मुलुकमा संघीयता नौलो प्रयोग भएका कारण शंका-उपशंका गर्नु आफ्नो ठाउँमा होला तर यसको सफल पक्ष पनि होला। हामी के कुराबाट बिचलित हुनुहुँदैन भने संविधान र संघीयतालाई सफल पार्न चुनाव नै उपयुक्त विधि हो। यदि सरकार बन्ने अवस्था पनि हुन्न र सरकारले काम गर्ने अवस्था पनि देखिन्न भने जाने त जनता माझमा नै हो। त्यसका लागि चुनाव अपरिहार्य हुन्छ।
त्यसो भए चुनाव घोषणा गर्नु गलत थियो त ? प्रधानमन्त्रीज्यूसँग बिकल्प भनेकै चुनावमा जाने हो। चुनावमा जानका लागि संसद् विघटन गर्नु नै उपयुक्त विधि हो। यो नै लोकतान्त्र सुन्दर पक्ष हो, यसमा असहमति हुनुपर्ने शंका गर्नुपर्ने कुनै कारण नै छैन । त्यसैले ताजा जनादेशमा जाने विकल्पभन्दा बाहिर जाने अबस्था छैन। जनताले यो सरकारलाई पाँच बर्षको लागि म्यान्डेट दिएका थिए तर राजनीतिक खिचातानीका कारण यो अवस्था सिर्जना भयो । यसलाई सफल अवतरण गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीज्यूले चुनावको घोषणा गर्नुभयो। यो संविधानलाई, याे लोकतन्त्रलाई खतराबाट बचाउन प्रधानमन्त्रीले यो कदम चाल्नु भएको हाे यसमा दुविधा हुने कुनै गुञ्जाइस राख्नु हुँदैन।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई मजबुद बनाउनका लागि चुनावकै बाटो एकमात्र सबल पक्ष हो। जनतामा जान राजनीतिक दलहरुले डराउनु हुँदैन र चुनावबाट भाग्ने छुट पनि छैन। त्यसैले नेकपा एमाले ताजा जनादेशमा जाने प्रतिबद्ध छ ।
तपाईको समयका लागि धन्यवाद !
विशेषगरी यो महत्वपूर्ण समयमा आफ्ना भनाइलाई जनताको माझमा सम्प्रेषण गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा जनताको लोकप्रिय मिडिया संचार केन्द्र डटकमलाई हृदयदेखि धन्यवाद व्यक्त गर्दछु।